Kirindy-Menabe: tratra ny voamboana miisa 50 | NewsMada
Kirindy-Menabe: tratra ny voamboana miisa 50
Mitohy ny trafikana hazo sarobidy eto amintsika. Tratran’ny tompon’andraikitra tany Kirindy, ny hazo tsy ara-dalàna, voamboana, miisa 50, ny asabotsy teo. Tao anaty kamiao iray miloko manga ireo hazo ireo, an’ny olona iray antsoina hoe F…. Tsy fantatra kosa ny tena tompon’ny hazo, efa mandeha ny fanadihadiana.
Anisan’ny Faritra arovana vaovao (NAP) ny alan’i Kirindy, ao anatin’ny ala maina Menabe Antema. Araka ny tatitra navoakan’ny fikambanana ONG Fanamby, mitantana ny faritra, ho ringana tanteraka ity ala ity raha tsy misy ny fepetra hentitra raisin’ny fanjakana sy ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Anisan’ireo karazana zavamaniry tena tandindonin-doza koa ny baobab, tsy fahita raha tsy eto amintsika, miampy ny hazo sarobidy, anisany ny voambona, toy izao tratra izao. Torak’izany koa ny karazana varika sy ny biby maro.
Tena manafaingana ny fahapotehan’ny ala Menabe Antema koa ny fandripahana azy vokatry ny tavy ataon’ny mponina. Misy ny fanentanana ataon’ny Fanamby, hambolen’izy ireo sakafo, toy ny katsaka, ny voanjo nefa tsy manimba ny ala sy ny doro ala. Manana ny lanjany amin’ny toekarena sy ny fizahantany any an-toerana.